शिक्षाको तिर्खाः कक्षा १ मा पढ्दै ७५ बर्षीया हजुरआमा ! - Everest Dainik - News from Nepal
शिक्षाको तिर्खाः कक्षा १ मा पढ्दै ७५ बर्षीया हजुरआमा !
खोटाङ, भदौ २० । जिल्लाको कोपिलासगढी गाउँपालिका ४ बाक्सिलाकी जुरीमाया राई उमेरले आराम गर्दै घरैमा बसरिहेको हुनुपर्ने हो । तर, ७५ बर्षीया उनको दिनचर्या स्कुल धाईरहेका स-साना विद्यार्थीको भन्दा फरक छैन ।
जुरीमाया किताबकापी बाकेर नातीनातिनी उमेरका बालबालिकासक्गै विद्यालय पुग्छिन् । पढेर उसैगरी घर फर्किन्छिन् । बाल्यकालमा पढ्न नपाएको धोको पुरा गर्न उनी बुढेसकालमा दिक्तेलस्थित सरस्वती माविमा गत साउन ६ गते कक्षा १ मा भर्ना भएकी हुन् ।
याे पनि पढ्नुस विद्युत् र टेलिफोन नहुँदा गाउँपालिकाको काम प्रभावित
जुरीमायाले छोटो समयमै सावाँ अक्षर जानिसकेको सरस्वती मावि, कक्षा १ का शिक्षक नुरकाजी सैँजुले बताए । उहिले समाजमा महिलाले पढ्नु हुन्न भन्ने मान्यता थियो पढ्ने रहर हुँदाहुँदै पनि मन मारेर बस्नुपर्ने अवस्था थियो हिजोआज जस्तो जताततै विद्यालय पनि थिएन । नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
वि.स. २००१ मा जन्मिएकी जुरीमायाले पनि लेखपढ गर्न पाउने कुरै भएन । त्यसबेला पढ्नु नपाएको चाहना बुढेसकालमै भए पनि पुरा गर्न पढ्नु थालेको जुरीमाया बताउँछिन् ।
ट्याग्स: Hajuraama, Khotang